Barcelona oo wax ka badashey go’ankeeda ku aadan Xidiga Frenkie de Jong. | laacibfm.com
Home Laacib Barcelona oo wax ka badashey go’ankeeda ku aadan Xidiga Frenkie de Jong.
Barcelona oo wax ka badashey go’ankeeda ku aadan Xidiga Frenkie de Jong.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ayna wax qorshe ah u haynin in ay iibiso Frenkie de Jong waxayna taasi badalkeeda dooneysa inay dulqaad u muujiso xidigan.
Inkastoo uu saftay 112 kulan tartamada oo dhan tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay Camp Nou 2019, ciyaaryahankii hore ee Ajax ayaa ku guuldareystay inuu gaaro 67 milyan ginni ee ahaa qiimaha xidigan.
Xili Barcelona ay dooneyso inay sare u qaaddo xaaladeeda dhaqaale, ayaa waxaa la soo jeediyay in kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Manchester United iyo Bayern Munich ay u muuqdaan inay ka faa’ideysan karaan.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain , kooxda reer Catalan ayaa sii hayn doonta adeega xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands ugu yaraan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Tababaraha cusub ee Xavi ayaa lagu xamanayaa inuu ka caawinayo 24 jirkaan inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisii ​​​​ugu fiicnaa iyadoo Barcelona ay isku dayeyso inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
De Jong ayaa wali afar sano iyo bar uga harsan tahay qandaraaskiisa kooxda La Liga.
Previous articleChelsea iyo Liverpool oo lagu wargaliyay go’anka kooxda Torino ee helitaanka daafaca Bremer
Next articleReal Madrid oo noqotay kooxdii ugu dambeysay ee ku biirta tartanka Rayan Ait-Nuri
Arsenal oo diyaar u ah inay baadi doonto xidiga khadka dhexe...
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Aston Villa Douglas Luiz ayaa lagu soo waramayaa inuu u soo baxay bartilmaameed macquul ah oo Arsenal ku haboon. 23 jirkaan ayaa wacdaro dhigay...
Compare Gas & Electricity Suppliers – Why Switching to a Fixed...
Robert Lewandowski oo ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican...
Liverpool iyo Man City oo xiiseyneya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester...
Saddexda ciyaaryahan ee Arsenal oo seegaya kulanka Liverpool EFL Cup